Suuriya oo Ciidamo iyo Taangiyo u dirtay Magaalada Zabadani – SBC
Suuriya oo Ciidamo iyo Taangiyo u dirtay Magaalada Zabadani
Ciidamo aad u hubeysan oo ka socda Dowlada wadanka Suuriya ayaa loo diray oo gaaray Magaalada Zabadani, oo u dhow xuduuda uu dalkaasi la wadaayo wadana Lubnaan waxaana Magaalada Zabadani ay ka mid tahay Magaalooyinka ay ka socdaan Dibad baxyada looga soo horjeedo Bashar al-Assad.
Ciidamada Dowlada ayaa Markii ay gareen Magaalada waxay ku rideen rasaas iyo madaafiic xoogan inkasta oo ay la kulmeen iska cabin xoogan oo ka imaaneysay ciidamo qaar oo ka soo goostay Dowlada wadankaasi kuwaasi oo doonaya inay Meesha ka saran Hogaamiyaha wadankaasi Bashar Al Assad.
Wararka laga helayo wadanka Suuriya ayaa ku warmaya in weerarkaas Dowlada ay ku qaaday ay ku dhinteen 12 qof oo rayid ah kuwaasi oo ay ku jiraan Sadex caruur da’ayar ah.
Kamal al-Labwani, oo ah sarkaal sare oo dhinaca Mucaaradka ka mid ah islamarkaasina laba todobaad ka hor u qaxay wadanka Jordan ayaa sheegay in isgaarsiinta Magalaada Zabadani la jaray balse isagu uu xiriir la sameeyay dadka qaar ee Magaalada Joogay isaga oo sheegay in ay dadku u sheegeen in taankiyo iyo askar rasaas rideysa ay magaalada soo galeen kuwaasi oo si aad ah u xoogan.
Ciidamada amaanka wadanka Suuriya ayaa waxaa ay sidoo kale duqeeyeen Magaalooyin kale oo xuduud dhow la leh Magaalada la weeraray ee Zabadani waxaana ay waxyeelo dhaawac ka soo gaartay tiro dad ah.
Weerarada u dhaxeeya Ciidamada amaanka iyo Kooxaha Kacdoonka ee wadanka suuriya ayaa nolosha maalin kasta dhaafiya Boqolaal shacab ah oo ka soo jeeda wadana Suuriya mana jirto cid soo kala dhexgashay Marka laga reebo ergada jaamacada carabta oo aan weli wax badan ka qaban xaalada wadanka.